မဗဒေါရဲ့ ဗဒေါလမျး: Who is she? (သူဘယျသူလဲ?)
Posted by mabaydar at 5:58 PM
8/31/2015 6:10 PM
@Anonymous - ဒီ post comment မှာ တောင်းဆိုသူများရင်တော့ ထပ်ရေးပေးဖို့ စိတ်ကူးရှိတယ်။ :D (တောင်းဆိုသူ မများလဲ Helloween Special ဆိုပြီး ရေးဖြစ်မလားတော့ မသိ။) ဒါပေမဲ့ သိပ်အားမပေးကြရင်တော့ ရေးရမှာ အားမရှိဘူး။
@နန်းညီ - သရဲ ကြောက်ရော ကြောက်တတ်လား?
8/31/2015 6:58 PM
ရေးသာရေးဘာ.. လာဖတ်ပေးမယ်.. အားရင်ပေါ့..း)
ဒီpost ကိုတော့ သိပါတယ်.. လက်တွေ့မကြုံလိုက်ပေ မဲ့.. နင်ပြောတုန်းကတော့ကြောက်သား...
နောက်postလေး တင်ပါအုံး.. လာဖတ်ပေးမယ်..း)
8/31/2015 10:51 PM
လင်းဦး (စိတ်ပညာ) said...
ဆက်ရန်၊ ကျွန်တော်လည်း ကြေက်တတ်တဲ့ အမျိုးထဲ ပါတယ်။ :D
9/01/2015 2:40 AM
သရဲဆိုတာ လူလိုပဲ တွေ့ဖူးနေတာဆိုတော့ ကြောက်တော့မကြောက်ဘူး။ မိန်းမဆိုလဲမိန်းမ၊ ယောက်ျားဆိုလဲယောက်ျား ပုံသဏ္ဍာန်ထင်ထင်ရှားရှား ဖြူဖြူလေးတွေ့ရတာကိုး။ လမ်းလျှောက်ရင်လျှောက်နေမယ်။ ထိုင်ရင်ထိုင်နေမယ် ဒီလောက်ပဲတွေ့ဖူးတာ။ လူနဲ့မတူတဲ့ သရဲမျိုးတော့မတွေ့ဖူးသေးဘူး။ တွေ့ရင်တော့ ကြောက်မယ်ထင်တယ်။ ဒီအတိုင်းပဲမြင်လိုက်ရရင်မကြောက်ပေမဲ့ ဘွားကနဲ လှန့်လိုက်ရင်တော့ လူဖြစ်ဖြစ် သရဲဖြစ်ဖြစ် သတိလစ်လောက်အောင်လန့်တတ်တာ တော်တော်ဆိုးတယ်။း)
9/01/2015 12:29 PM
ကြောက်တယ်လည်း မဟုတ် မကြောက်ဖူးလည်းမဟုတ် သူလည်း သူ့ဘ၀နဲ့သူ ပဲလို့ မှတ်ပါတယ်။
၂။သရဲဆိုတာ ရုပျရှငျတှထေဲကလို အကောငျလိုကျကွီးလို့ထငျသလား?
သရဲဆိုတာ သူတို့ရဲ့ ကုသိုလ်ကံအဆင့်အလိုက် ပြနိုင် ဖန်ဆင်းနိုင်မယ်လို့ ထင်တဲ့ အတွက် အသံချည်းပဲ ဖြစ်နိုင်သလို ရုပ်ပါမြင်ရတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်
၃။ဒါမှမဟုတျ သရဲဆိုတာ ကြှနျမတို့ကို တနညျးနညျးနဲ့ ထိခိုကျနာကငျြအောငျ လုပျနိုငျတယျလို့ လကျခံသလား?
ဒုတိယမေးခွန်းမှာ ဖြေထားသလိုပါပဲ သူတို့ရရှိတဲ့ အဆင့်အလိုက် သူတို့မှာ လုပ်နိုင်စွမ်းတွေ ရှိပါတယ်။
သရဲကို မမြင်ဖူးဘူးလို့ ကိုယ့်အတွေ့အကြုံအရဖြေရမှာပါပဲ..ဒါပေမယ့် အသံကိုတော့တခါမက ကြားဖူးပါတယ် ခံစားမှုအရလည်း ကိုယ့်ကို တယောက်ယောက်က ကြည့်နေသလို ခံစားဖူးပါတယ်..
အဖြေလေးတွေကို မဗေဒါ ကျေနပ်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်.
9/01/2015 1:55 PM
ဟိုလေ ......... ပြောချင်တာကတော့လေ ......... ဟိုလေ........ နောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်ဆိုတဲ့ စတိုရီလေးကို ချရေးပေးပါလားလို့ ....... ။ ဒါနှင့်လေ အိမ်သာသွားတဲ့ သရဲက မိန်းမပုံစံဆိုတော့ ဘယ်လိုဝတ်စားထားလဲ ၊ ဆံပင်ရှည်လား ၊ အရပ်အမောင်းကကော ဘယ်လောက်လဲ ၊ အဓိက သိချင်တာကတော့လေ အဲ့သရဲမက ချောလားဟင် ........းD
9/01/2015 10:20 PM
ဘယ်လို ခံစားချက်လဲတော့မသိဘူး .. တစ်ခါတစ်လေ ကိုယ့်နောက်မှာ အမြဲတစ်ယောက်ယောက်ရှိနေတယ်လို့ ခံစားရတတ်တယ်။ နေရာတိုင်းတော့မဟုတ်ဘူး. ကြုံခိုက်ဆုံခိုက်ပေါ့. အဲလိုနေရာမှာ ညအိပ်ရတော့မယ်ဆိုရင် သေချာတယ် ဘယ်လိုမှ အိပ်မရတော့ဘူး..အလိုလိုနေရင်းကို နိုးနိုးလာတာ..ကိုယ့်ကို သတိပေးနေသလိုမျိုး..ပေါ့. သို့ပေမယ့် သရဲတော့ အခြောက်လဲမခံရသလို မြင်လဲ မမြင်ဖူးဘူး . :) :)
သရဲကြောက်တယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် သရဲကားမကြည့်တာတောင် အတော်ကြာပြီ။ တွေ့ဖူးလားဆိုတော့ မတွေ့ဖူးဘူး။ ဒါပေမဲ့ တွေးတွေးပြီး ကြောက်တက်တယ်။ ငယ်ငယ်က သိပ်မကြောက်တက်ပေမဲ့ အသက်ကြီးလာတော့ ပိုကြောက်တက်လာ သလိုပဲ။
9/03/2015 3:50 PM
@Claire - အင်း.. နင်တို့အခန်းဘက်က ထွက်လာတာဆိုတော့လဲ... ဒါပေမဲ့ အဲ့တုန်းက ဆက်မတွေးပဲ နေလိုက်တော့လဲ မကြောက်တော့ပါဘူး။ ၁ညပဲ အိပ်တာဟုတ်? နောက်တစ်ညဆိုရင်တော့ အိပ်ရဲမှာ မဟုတ်ဘူး။
@လင်းဦး (စိတ်ပညာ) အစ်ကို့ကို မကြောက်တတ်ဘူးထင်တာ.. :D
@နန်းရွှေမှုံ - ဟုတ်တယ်... ခြောက်ခံနေရတဲ့အချိန် သရဲမှန်းသိရင်တော့ အတော်ကိုကြောက်မှာ။ ခုကတော့ အဲ့ဒိအချိန်မှာ သရဲမှန်းမသိလိုက်တော့ မကြောက်ဘူး။ ခုထက်ထိလဲ အဲ့ဒါ သရဲလားကိုယ့်စိတ်ထင်တာလားတော့ မယုံနိုင်သေးဘူး။
@TZN - မေးထားတဲ့ မေးခွန်းတွေကို အသေအချာလေး ဖြေသွားတာ TZN တစ်ယောက်ပဲ။ ကျေးဇူး။ မဗေဒါလဲ တွေးတွေးပြီးကြောက်တတ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ့်ကို ကြည့်နေသလိုမျိုးတို့ဘာတို့ကတော့ စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တာရော မဖြစ်နိုင်ဘူးလား?
@မိုးဇက် - သရဲမိန်းမလို့ ထင်ရတဲ့ တွေ့လိုက်တဲ့ တစ်ယောက်ကတော့ သာမာန်လူလိုပဲ ၀တ်ထားတာပဲ။ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်နဲ့တူနေလို့တောင် စကားလှမ်းပြောလိုက်သေးတယ်ဆိုတော့ သူဝတ်နေကျပုံစံမျိုးပဲ။ ဒါမှမဟုတ်ရင်တော့ သူငယ်ချင်းယောင်ဆောင်ထားတာလဲ ဖြစ်ရင် ဖြစ်မှာပေါ့။ ဆံပင်ကလဲ သူငယ်ချင်းလောက်ပဲ။ ပုခုံးကျော်ကျော်အရှည်။ ချောမချောတော့ ရုပ်မမြင်လိုက်တော့ မသိဘူး။
@မဆွေလေးမွန်- အင်း... အဲလိုဖြစ်ရင် အကြောင်းရင်းကို နည်းနည်းလိုက်ကြည့်ကြည့် မဟုတ်ရင်တော့ စိတ်ချောက်ခြားတာလဲဖြစ်နိုင်တယ်။ သရဲကြောက်တဲ့သူ တော်တော်များများက အဲ့လိုခံစားကြရတယ်ထင်တယ်။ မဗေဒါဆို ညဘက် မျက်နှာသစ်တိုင်း အလကားနေ မှန်ထဲက ကိုယ့်ပုံကိုယ် ကိုယ်လှုပ်သလို လိုက်မလှုပ်မှာ သိပ်ကြောက်တာ။ အဲ့ဒါကြောင့် ငယ်ငယ်က အင်္ဂလိပ်စာ ဆရာမကပြောတယ် သရဲကြောက်တဲ့သူတွေက စိတ်ကူးစိတ်သန်းကောင်းတဲ့သူတွေဖြစ်မယ်တဲ့။ မရှိတာကို စိတ်ကူးပုံဖော်ပြီး ကြောက်ကြလို့လေ။ အော်... ဒါပေမဲ့ အစ်မခုလို ခံစားရနေရတာကို မဖြစ်နိုင်ဘူးပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်။ ဟုတ်ချင်လဲဟုတ်မှာပါ။ လောကမှာ ကိုယ်မသိ မမြင်နိုင်တာတွေကို မရှိဘူးမှ ပြောလို့မရတာ။ ဗေဒင်လေးဘာလေး မေးကြည့်ပါလား။
@shin - စိတ်ကူးစိတ်သန်းကောင်းတဲ့ လူနောက်တစ်ယောက်ပါလား။ ဟီး... မဗေဒါလဲ တူတူပဲ ငယ်ငယ်က သရဲကားကြည့်ရဲတယ်။ ခုဆို မကြည့်ရဲတော့ဘူး။ ပြန်တွေးတွေးပြီးကြောက်လို့။ အသက်ကြီးလာလေ အစွဲအလန်းက ကြီးလာလေမို့လား မသိပါဘူး။
9/03/2015 5:17 PM